Ku dhawaad 30 Ruux oo ay ku jiraan Soomaali oo la socday doon oo ku degtay badda Mediterranean. - Caasimada Online
Home Warar Ku dhawaad 30 Ruux oo ay ku jiraan Soomaali oo la socday...
Ku dhawaad 30 Ruux oo ay ku jiraan Soomaali oo la socday doon oo ku degtay badda Mediterranean.
Tripoli (Caasimadda Online) – 31 ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay sida ay sheegayaan wararka ay baahinayaan Warbaahinada qaar kadib markii ay doon ay la socdeen tahriibayaashaan ay ku quustay Badda Mediterranean-ka loo yaqaan.
Dadka geeriyooday oo la socday doon ka baxday dalka Libya waxaana ay ku socdeen dalka Talyaaniga halkaasoo ay doonayeen inay uga sii gudbaan wadamada Yurub sida ay Xaqiijiyeen Saraakiil ka tiesan Ciidamada Badda dalka Liibiya.
Sida ay wararka sheegayaan dadka Musiibadaas ku dhintay waxaa ku jiray Haween iyo Carruur aad u yar yar oo qaarkood ay ku jireen Xilligii Umusha.